စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၃ ) ( မီဒီယာ ဆရာတို့ရေ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၃ ) ( မီဒီယာ ဆရာတို့ရေ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၃ ) ( မီဒီယာ ဆရာတို့ရေ )
Posted by Foreign Resident on May 18, 2012 in Think Different | 30 comments
သစ်ထူးလွင် Web Site ထဲက
ကိုကျော်စိုိးနိုင် နှင့် အင်တာဗျူး
( http://www.thithtoolwin.com/2012/05/blog-post_7456.html )
ဆိုတဲ့ Post နှင့် Comment တွေကို ဖတ်မိပြီး တွေးမိတာလေးတွေပါ ။
အမေစု ရဲ့ လုံခြုံရေး ကိုကျော်စိုိးနိုင် နှင့်
ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေ ပိုင်တဲ့
Express Time ဂျာနယ် သတင်းထောက် တို့ရဲ့
အချင်းများမှု ကနေ စလာပြီး
Express Time ဂျာနယ် က ဆက်ဖွလာပါတယ် ။
Professional ဆန်စွာ လုပ်ကိုင်စားနေတဲ့
ဂျာနယ်လစ်တွေကို အားနာပါတယ် ။
Media တစ်ခုပေါ် တက်ရေးရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ၊
Media များကိုလည်း အားနာပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အဘ ရဲ့ Personal အမြင် ၊
မှန်တယ် ထင်တာကို ပြောရရင်တော့ ၊
လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ ၊
ဒီ တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးမှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ ၊
သတင်းစာ ဂျာနယ် အားလုံးပေါင်း ရဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးပြုမှုဟာ ၊
အမေစု ရဲ့ ထမိန် တစ်ယမ်းစာ လောက်နှင့်သာ ညီမျှတဲ့ ၊
တိုင်းပြည် အကျိုးပြုမှုပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အခုအချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် ၊
အမေစု နှင့် ဦးသိန်းစိန် က မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ် ။
တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးမှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ ၊
သတင်းစာ ဂျာနယ် အားလုံးပေါင်း ရဲ့ အရေးပါမှုက တောင်မှ ၊
သိပ် တန်ဖိုးထားလောက်စရာ မရှိသေးပါဘူး ။
သိပ် တန်ဖိုးထားစေချင်ရင် တော့ ၊
ဒီ့ထက် အများကြီး ပိုပြီး ကိုယ်ကျိုးစွန့် ကြိုးစားပြကြပါအုန်း ။
အခု လောလောဆယ်တော့ ၊
ကိုယ့်အဆင့် ကိုယ်သိပြီး ဆင်ခြင်ကြပါအုန်း ။
လို့ပဲ ပြောလိုပါတယ် ။
ဘရာကြော်ပါ အဘဖောရေ … ။ လက်မထောင်သွားပါတယ်နော် … ။
တစ်ချို့သော ဂျာနယ်တွေ ၊ မီဒီယာလောကကို သတင်းသမားကျင့်ထုံးနဲ့ အညီမနေထိုင်ပါပဲ … ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးနှက်ဖို့အတွက် ခုတုံးလုပ် အသုံးချနေတာ …. အခကြေးငွေပေးပြီး ၀ယ်ဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူကိုတောင် စော်ကားနေသလိုပါပဲ… ။
လက်ထဲ ကလောင်ရှိတာနဲ့ …. ရေးချင်တာရေးခွင့်ရှိသွားပြီ ၊ လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့် ၊ ဖွချင်တာ ဖွခွင့်ရပြီလို့ ထင်မှတ်နေတဲ့ … သတင်းထောက်များလည်း ရှိနေလို့ … ခဲရောရော ၊ ပဲရောရောတွေ ဖြစ်နေတာပါ ။ ပြောရလျှင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စိတ်ကြီးဝင် (မရှိတာကို အရှိလုပ်) ပါဝါပြချင်တဲ့လူများလည်း ပါသပေါ့လေ … ။ နောက်ကွယ်က အယ်ဒီတာတစ်ချို့ကလည်း …. ငွေအား နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာကြီး လက်ကိုင်ပြုပြီး …. မှန်မှန် မှားမှား ဖင်ပိတ်ငြင်းတယ်ပေါ့ … ။
ကလောင်လက်နက်သာ စိတ်ဓါတ်သိပ်ဖျင်းသူတွေလက်ထဲရောက်သွားလျှင် … မိုးကြိုးအစင်းတစ်ရာပစ်တာထက်ဆိုးတော့မယ် ။ လွဲမှားတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို မှိုင်းတိုက်ပြီး ပိုက်ဆံညာယူခဲ့တဲ့ … သတင်းမျိုးလည်း ရှိ ခဲ့ဖူးပါတယ် … ။
အဘရေ .. ကျွန်မကတော့လေ … ဂျာနယ်မှာရေးထားတာဆိုလျှင် … 70% ယုံကြည်စိတ်နဲ့ပဲ .. ဖတ်မိပါတယ် … ။ :D
“အမေစု ရဲ့ ထမိန် တစ်ယမ်းစာ လောက်နှင့်သာ ညီမျှတဲ့ ၊
တိုင်းပြည် အကျိုးပြုမှုပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ” ။ Bravo !!! အဲဒီစာသားလေးတော့ ကြိုက်သွားပြီး အဘဖောရေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲ နဲ့ တိုးတက်မှူ့တွေ မှန်သမျှ ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည် ကြောင့်က 90% လောက်ရှိတယ်။ သူရဲ့ လုံခြုံရေးနေရာ မှာ ကျုပ်တာဆို အဲဒီကောင် ဒါထက်ဆိုးသွားမယ်။ သက်သက်နာမည်ကြီး ချင်လို့လုပ်တာပါ။ တခါတလေ ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေး ကိုအား မရတောင်ဖြစ်မိတယ်။ သူတို့မှာ ဘာ Special Equipments မှမပါပဲ လူအားသက်သက် လုပ်နေတာပါ။
အဘဖေါက အနီကဒ်လေးတွေတောင်းတယ်…လား…..။ :D
အိတုန်ကလဲ ကိုယ့် အကိုမီဒီယာသမားကိုမှ အားမနာကွယ်…. :D
အင်း…. ၀င်ပြီးအားဖြည့်ကြပါဦးမယ်။ ကျုပ်ကိုတော့ညှာညှာတာတာဆဲကြပါ။
မီဒီယာသမားတွေအားလုံးကိုမဆိုလိုပေမယ့် အဲဒီထဲက သိပ်အချိုးအစားမနည်းတဲ့ တချို့ဟာ –
ငါမီဒီယာသမားပဲ ၊ ငါရေးချလိုက်ရင်၊ ငါဖွလိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ်.. ဆိုပြီးတော့..
မာန်တက်ကြပါတယ်။ လူညံ့တွေဆိုတာ အဲဒါပဲလေ။ လူယုတ်တွေဆိုတာလဲ အဲဒါပဲပေါ့..။ သူများက သေနတ်လက်ထဲကိုင်လို့ရလို့ အနိုင်ကျင့်တော့ ဘာလေးညာလေးနဲ့ မိုးပြောဂျိုးပြော…
ကိုယ်က မီဒီယာလက်နက်လဲ ကိုင်လို့ရရော မောက်မာရတာနဲ့၊ ခွာသံပေးရတာနဲ့၊ အနိုင်ကျင့်ရတာနဲ့၊ အေးဓမြတိုက်ရတာနဲ့၊ ငွေညှစ်ရတာနဲ့၊ ခြိမ်းခြောက်ရတာနဲ့…..
(အဲဒါတွေအားလုံး ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခံဘူးတယ်နော်.. ဖင်ပိတ်မငြင်းနဲ့..)
ကျုပ်ပြောတာ မီဒီယာသမားကောင်းတွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး နော် အစကတည်းကကြိုပြောပြီးသားပါ။
မီဒီယာသမားဆိုးဘက်ကနေပြီး လက်သည်းဆိတ်လို့ လက်ထိပ်နာပေးမယ့်လူများရှိရင်လဲ မတတ်နိူင်ဘူးဗျို့…..
ဒေါ်စုကိစ္စကတော့ ကျုပ်က အဲဒီလုံခြုံရေးတာဝန်ခံမဟုတ်လို့ ၀င်မပြောတော့ပါဘူး..။
ကျုပ်သာ လုံဒေါ်စုရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရရင် ကျုပ်အတွက်တော့ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုသာလျှင် တိခုတည်းသော အရေးထားစရာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်စုလုံခြုံရေး ဘေးကင်းရေး အနှောက်အယှက်မဖြစ်ရေးအတွက်ဆိုရင် –
လိုအပ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုမဆို ဘာမဆိုလုပ်မယ်။ (ဘာမဆိုလုပ်မယ်)
” လိုအပ်ရင် ကျုပ်ကိုယ်တိုင်အသေခံမယ်။
ဘာမဆိုလုပ်မယ်။ (ဘာမဆိုလုပ်မယ်) “
” အမေစု ရဲ့ ထမိန် တစ်ယမ်းစာ လောက်နှင့်သာ ညီမျှတဲ့ ၊
တိုင်းပြည် အကျိုးပြုမှုပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်…” တဲ့.. ဗရာဗို…ချီးယားစ်… ထိရောက်တဲ့ အသုံးအနှုံးလေးပါပဲ .. ဘကြီးရေ့…. လက်မထောင်သွားတယ်ဗျို့..
အဆင့်အတိုင်းသာ သွားဂျေးဆို ကမ္ဘာလောကဂျီး အဂုလို တိုးတက်မလာဘူးဗျို့.. (တဖက်က ကြိဗျန်ဒေါ့ သေသေဝပ်ဝပ် မသွားဂဲ့ဂျလို့ ကမ္ဘာဂျီး ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်း ဖောက်ပြန်ပျက်ဆီးလာဒါ။ ထားပါဒေါ့.. အဲဒီ ကိစ္စပပါဂျေး၊ နည်းပညာနဲ့ ယနေ့ခေတ်လူနေမှုစနစ်ကိုပဲ စံပြုပြောမည်)။ ဝေဖန်ဇယာရှိ ဝေဖန်၊ ဆဲဈယာရှိ ဆဲရမှာဘဲ။ လူဂျီး လူသေး နားမလည်းနိုင်ဘူး။ အပြောအဆို မခံနိုင်ရင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဘာယေး ညာယေး ဝင်မပါနဲ့။ မကျေနပ်ရင် ကိုယ်ဂလည်း ပြန်ဆဲ ပြန်တီးနိုင်ဒယ်။ ဒါ ဒီမိုကရေစီ ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ဘဲ။ သဒင်းသမား အရေခြုံ လက်သီးပုန်းထိုး အဆိပ်ခပ်ရင်သာ ဝိုင်းဆော်ရမှာ….။ လုပ်မှဒေါ့ မှားမှာပဲ၊ မှားမှဒေါ့ ဖွမှာပဲ၊ ဖွမှဒေါ့ ရှုပ်မှာပဲ..ရှုပ်မှဒေါ့ ရှင်းရမှာပဲ..ရှင်းမှဒေါ့ နည်းနည်းရှုပ်မှာပေါ့..။ သဘာဝဟာ သဘာဝပါ….။
အခုဂျာနယ်တွေက စာနည်းနည်း ကြောငြာများများ ….
ပြောပစ်လိုက် အဘဖောရေ ။ လက်မအားလုံးထောင်သွားတယ်ဗျို့
ပြောစရာမကျန်အောင်ကို မှန်နေလို့လက်မတချောင်းပဲထောင်သွားပါတယ် အဘဖောရေ။
အဘဖောရေ …….. အသက်ရှည်ဦးမယ် မနေ့ကတောင် အဘအကြောင်းစဉ်းစားနေတာ ….. အပျောက်နေ တယ်လို့လေ ……. အဘရဲ့ပို့စ်တွေကို သိပ်နားမလည်တော့ မ၀င်ရေးဖြစ်ဘူး အခုပို့စ်ကိုတော့ နားလည်လို့ အားပေးသွားပါတယ်နော့ ……… အဘရဲ့ တပည့်မလေး ချာလီ အိုစားကား
အဘဖေါပြောမှသိရတော့တယ်၊ Express Time မီဒီယာ က၊ခင်ရွှေပိုင်တာကိုး၊ဒါဆိုပြည်သူ့အကျိုးပြု အတွက်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ၊မီဒီယာဖြစ်ပါ့မလား။ဒင်းကမီဒီယာတွေကိုစော်ကားခဲ့ပြီး ခုဘာသဘောနဲ့။
ကျန်တဲ့ပြည်သူ့အကျိုးပြုမီဒီယာကြီးတွေအ ကြားစုန်းပြူး ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလည်း။
ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင် ဘလော့ဂါ တွေ များများခိုင်မာကြဘို့ပိုအရေးကြီးလာပြီ၊တစ်ကယ်အကျိုးပြုမီဒီယာကြီးတွေနှင့်
လေးစားရသော ပြည်သူချစ်သည့်ဂျာနယ်ကြီးများမှ လည်း၊မီဒီယာလောကကို ညစ်စွန်းထင်စေမည့်၊ယင်း
စုန်းပြူးများ၏၊ခြေလှမ်းကိုပါ ကောင်တာလုပ်ပြီး၊အမှန်ပြင်နိုင်ရေးအတွက်၊ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ဘလော့ဂါများနှင့်
(၈)ခုမြောက် လက်မလေး ကျနော်ထောင် အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။
ကမ်းနဲ့ဝေး နေတယ်ထင်ပါ့။ နေကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ :-)
မတူတဲ့ နေရာက ပြောမယ်။
တစ်ဖက်က မှားရင်လဲ မှားမပေါ့။
တစ်စုံတစ်ခု ညိတယ် ဆိုကထဲ က ကိုယ့်ဖက်မှာလဲ အစွန်းထွက်ခဲ့လို့ဘဲ။
နောက်ပိုင်းလဲ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်မလာဘူး လို့ပြောမရဘူး ဆိုတော့
ပြီးခဲ့တာကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး နောင်ဒါမျိုး (သို့) အလားတူ မီဒီယာ နဲ့ ညိမဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် သင့်တယ် ဆိုတာကို NLD က သက်ဆိုင်သူ လူကြီးများ အသေအချာ စဉ်းစား ရပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံခြုံရေး က တော့ အရေးကြီးဆုံးပါဘဲ။
ဒါကို ရှဉ့် လဲ လျှောက်သာ၊ ပျားလဲစွဲသာ ဖြစ်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ကစားကွင်းထဲ မှာ ကစားတဲ့ သူ တွေ မမြင်တာ ကို ကွင်းထဲ က ပရိတ်သတ် က ပိုမြင်ပါတယ်။ အဲဒီ အမြင်မှာ ဘက်မျှဖို့ လိုမယ်။
သူများက ချရင် အော်ဆဲတာလဲ ဆဲတာပေါ့။
ကွင်းထဲကို ရေဗူး နဲ့တော့ မပေါက်သင့်ဘူး။
ကိုယ့်အသင်းက သူများအသင်း ကို ချရင်လဲ အားမပေးသင့်ဘူး။
စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အဆင့်မြင့်တဲ့ ပရိတ်သတ် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ဒါတင်မက တစ်ခုခု ဆိုရင် ချစ်သော မျက်စိ နဲ့ ကြည့်တာလဲ ကြည့်ကြတာပေါ့။
စုံလုံးကန်း ပုံစံနဲ့ မကြည့်ဖြစ်အောင်တော့ ကျွန်မ တို့ ဂရုထားကြရမယ်။
ကိုယ့်အသင်းရဲ့ ဟာကွက် တွေ ကို လဲ ချစ်သော မျက်စိ နဲ့ ဖုံးမထား သင့်ပါဘူး။
အဲဒါတွေကို စေတနာ အမှန် နဲ့ ထောက်မပြဘဲ ထားရင် သူများက အဲဒီ ဟာကွက် ကို နင်းပြီး အနိုင်ယူ သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ “ကိုယ့်လူတွေ” ဘာမှားနေလဲဆိုတာ ကြည့်နေပြီး ဝေဖန်ထောက်ပြရပါမယ်။
ကျွန်မရဲ့ “ကိုယ့်လူတွေ” ဆိုတာက NLD မှ မဟုတ်
ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေကို တိုးတက်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလိုတဲ့၊
ပြည်သူတွေ ကို လက်ကမ်းပေးမဲ့၊
ငါကောင်းစားရေး ဝါဒီ မဟုတ်တဲ့
ခေါင်းဆောင်သူများ အားလုံး ကို ရည်ညွန်းပါတယ်။ :-)
” တစ်စုံတစ်ခု ညိတယ် ဆိုကထဲ က ကိုယ့်ဖက်မှာလဲ အစွန်းထွက်ခဲ့လို့ဘဲ ”
မှန်ပါတယ် ၊ မခင်လတ် ။
ကိုယ့်ဖက်ကလဲ နဲနဲတော့ အစွန်းထွက် ခဲ့တာ ပါသပေါ့ ။
ဒါကြောင့်လည်း ကျနော် ပါးပါးလေးပဲ တို့ထိထားတာပါ ။
ဟီလာရီ ကလင်တန် လာတုန်းက ဆိုရင် ။
လေယာဉ် မဆိုက်ခင် ၄ / ၅ နာရီ ကြိုတင်ပြီး
မီဒီယာသမားတွေ သတင်းပို့ အစစ်ဆေးခံရတယ် ။
အဲလို သတင်းပို့ အစစ်ဆေးမခံရင် ဝင်ခွင့်ကဒ် ထုတ်မပေးဘူး ။
သူတို့ ယူယူလာသမျှ မီဒီယာ ပစ္စည်းကိရိယာတွေအားလုံး
ကြမ်းပေါ်မှာ စုပုံချခင်းပေးထားပြီး ပေ ၂၀ နောက်ဆုတ်ပေးရတယ် ။
ပြီးမှ ခွေးနှင့် နမ်းပြီးရှာတာ ။
ပြီးတော့ မီဒီယာ သမားတွေကို
အကွက်သေးသေးလေးကလေးပဲ စည်းတားပေးထားပြီး ၊
အဲဒီ အကွက်ကလေးထဲကနေပဲ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့်ရှိတာ ။
နေရာ အနှံ့ သွားချင်သလိုသွားပြီး
Direction မျိုးစုံကနေ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့် မပေးဘူး ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနှင့်ကတော့ ၊
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ၊ အမေစုဟာ
တန်ဘိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ ၊ အစားထိုးစရာ မရှိတဲ့ ၊ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ပါ ။
ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မျှော်လင့်ချက် ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက်ကတော့ ၊
အမေစုဟာ ဟီလာရီ ကလင်တန် ထက်
အဆပေါင်းများစွာ ပိုပြီး အရေးပါ တန်ဘိုးကြီးပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အမေစု ခမျာ ၊
ဟီလာရီ ကလင်တန် ကို အကာအကွယ်ပေး သလိုမျိုး ၊
လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ်ကို ရရှိဖို့အတွက် ၊
သူ့ခမျာ ငွေအား ၊ လူအား ၊ အာဏာအား မရှိရှာပါဘူး ။
အဲဒီအတွက် သန်းပေါင်း ၆၀ သော ပြည်သူပြည်သားထုကြီးက
ရင်တမမ နှင့် နေ့တဓူဝ စိုးရိမ်နေရတာပါ ။
ကျွန်တော်ကအစ စိုးရိမ်နေတာက ၊
အမေစုကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရနိုင်တာပါ ။
ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း တော်တော်များပါတယ် ။
ကျနော် တစ်ဦးတည်းရဲ့ အထင် နှင့် အမြင်ကို ပြောရရင် ၊
ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပါ ။ စောတာ နှင့် နောက်ကျတာပဲ ကွာမှာပါ ။
စကားမစပ်ပါ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတင် ၊
အမေရိကန် နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီး ၊
နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြန်လာနိုင်ဖို့ လာဆွေးနွေးနေတဲ့ ၊
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်လတ် တစ်ယောက်နှင့် စကားပြောဖြစ်တော့ ၊
” နောက်ကြောင်းပြန်သွားနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေလည်း အများကြီး ရှိနေသေးတယ် ”
ဝမ်းနည်း စိုးရိမ်ဖွယ် ကြားသိခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီလို စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြားမှာ
အသက်စွန့် စွန့်စား နေရရှာတဲ့ ၊
ကျနော်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ တဦးတည်းသော မျှော်လင့်ချက် ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ၊
အခုမှ ခါတော်မှီ လုပ်စားလာတဲ့ ၊
ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေ လိုလူ ရဲ့ တပည့် မီဒီယာသမားဆိုသူက
လာ နှဲ့တာကိုတော့ မကျေနပ်တာ အမှန်ပါပဲ ။
မီဒီယာသမားထဲက တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ် စွန့်စား ခဲ့ဘူးတဲ့ ၊
စွန့်လွှတ် စွန့်စား နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေး လို ၊
ဦီး ဝံသ လို လေးစားရတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။
သူတို့ကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး ။
သူတို့ကိုပါ ရောပြောမိသလိုဖြစ်ခဲ့ရင် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် ။
မ ခင်လတ် သိပါတယ် ။
ကျနော်ကလည်း နိုင်ငံတကာ လှည့်နေပြီး ၊
လက်ရှိလည်း ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးမှာ အခြေချနေတဲ့ ၊
လူ့အခွင့်အရေးကို နှစ်သက် မြတ်နိုးသူတစ်ဦးပါ ။
လူ့အခွင့်အရေး ၊ မီဒီယာ အခွင့်အရေး တွေကို နားလည်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာက ၊
အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ၊
အစိုးရက အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးရတယ်လေ ။
အီရတ်နိုင်ငံမှာ ” စေတန် အမေရိကန် ကျဆုံးပါစေ ” လို့ မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့
အီရတ် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမား ရဲ့ ဘေးပါတ်ပါတ်လည်မှာ
အမေရိကန် စစ်သားတွေ အပြည့်နှင့် လုံခြုံရေး ယူပေးထားတာကို သတိပြုမိမှာပါ ။
ဒီမှာကတော့ ၊ သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ ။
လူ လူချင်း အခွင့်အရေး တန်းတူညီမျှမှုကို လက်ခံသော်လည်း ၊
လူ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တန်ဘိုးတွေက မတူညီကြပါဘူး ။
လမ်းဘေးမှာ နေ့နေ့ညည မူးလဲနေတဲ့ လူမိုက် တစ်ဦးရဲ့ တန်ဘိုး နှင့် ၊
လေးသင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီ ဆည်းပူးခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင် ရဲ့ တန်ဘိုး နှင့် ၊ မတူသလိုပါဘဲ ။
အဲဒီ နေ့နေ့ညည မူးလဲနေတဲ့ လူမိုက် တစ်ဦး ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ ၊
လူ့လောကကြီး အနေနှင့် သိပ်မနစ်နာလှပေမယ့် ၊
ဘုရားရှင် ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရရင်တော့
လူ့လောကကြီး ဟာ အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံး နစ်နာသွားသလိုပါပဲ ။
ကျနော်တို့ သာမန် တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ၊
အဲဒီ သတင်းထောက်ရဲ့ ( လက်ရှိ ) တန်ဖိုးဟာ ၊
အမေစု မပြောနှင့် အမေစု ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ယူပေးနေတဲ့ ၊
ကိုကျော်စိုိးနိုင် ရဲ့ စီးထားတဲ့ ဖိနပ် တစ်ဖက်စာလောက်တောင် ၊
တန်ဖိုး ရှိရဲ့လား ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်စရာပါပဲ ။
ဝန်ခံပါတယ် ကျနော် ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း
ကိုကျော်စိုိးနိုင် ရဲ့ ဖိနပ် တစ်ဖက်စာ လောက်ပဲ တန်ဖိုး ရှိတဲ့သူပါ ။
ကျနော် အခုလိုမျိုး ရေးမိတာဟာ ၊
မီဒီယာပိုင်းက ရန်သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်သလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်နှင့် ထပ်တူ ၊ အားမလို အားမရ ခံစားနေရသော်လည်း ၊
အခုလို စည်းစည်းပိုင်ပိုင် မရေးတတ် ၊ မရေးရဲ သူများကို ကိုယ်စားပြုပြီး အမုန်းခံရေးမိနေတာပါ ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်နှင့် ခံစားချက် တထပ်တည်းကျတဲ့သူတွေ မနဲဘူး ဆိုတာကို ၊
အပေါ်က Comment တွေကို ဖတ်ပြီး သိရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။
ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မျှော်လင့်ချက် ပါ ။”….နဲ့
“ကျွန်တော်ကအစ စိုးရိမ်နေတာက ၊
အမေစုကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရနိုင်တာပါ ။”..ဒီနှစ်ချက်မှာ တစ်သဘောတည်းရှိပါတယ်..
ကျုပ်လည်း ဒီကိစ္စကို အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပါတယ်…
ပိုစ်ရော ကွန်မန့်တွေရော ကောင်းလွန်းလို့ ကိုယ်ပြောစရာမကျန်တော့လို့ မမန့်ပဲနေပြီး + လိုက်ပေးတာ မရတာနဲ့ပဲ မန့််လိုက်ရတယ်။
အရင်ဘ၀က အကြွေးပြန်တောင်းတယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ သဂျီးရေ။
(၃ကိုယ်ခွဲတာ အကျင့်ပါနေပြီမို့ ပြင်မရတာ သည်းခံပါ။)
အရင်တခါ အဘပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးကတဲက အခုတခါလည်း တွေ့လို့ဖတ်ကြည့်တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အဘက အမေစုကိုတော့ အတော် ကြည်ညိုတယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပဲ။ “အမေစုရဲ့ ထမိန်တယမ်းစာ လောက်နဲ့သာ ညီမျှတဲ့” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ကတော့ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ။ စာဖတ်သူ တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို တခါတည်း ကိုင်လှုပ်နိုင်လိုက်တဲ့ စကားလုံးလေးပါပဲ။
ဟုတ်ပါ၏ …မှန်ပါ၏…ထောက်ခံပါ၏..ထောင်ပါ၏ …လက်မ လက်မ..
အဘဖော (အများခေါ်သလို) ပို့စ်ကိုတခါမှတော့ ၀၀်မမန့်ဖူးပါဘူး ဒီတခုကတော့ အားမပေးရင်ကိုမနေနှိင်လို့ အားပေးသွားပါတယ်..
”အမေစု ရဲ့ ထမိန် တစ်ယမ်းစာ လောက်နှင့်သာ ညီမျှတဲ့ ၊”
အဘဖော ကျွန်တော်ကတော့ အဘကို မသိဘူး သူများခေါ်လို့ လိုက်ခေါ်တာ
အရင်ခေတ်က ရွှေဘက လူဆိုးတွေကို ထိုးလိုက်သလို
အရှေ့တောင်အာရှမှာ မြန်မာအသင်းက တစ်ဖက်အသင်းကို ဂိုးသွင်းလိုက်သလို
၈.၈.၈၈ မှာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒမှန် အော်ဟစ်ဖေါ်ထုတ် ခွင့် ရခဲ့သလို
အချစ်ဦး ဆီက ပထမဆုံး ပြန်စာ လေး ဖတ်လိုက်ရ သလို
လူရည်ချွန် စာမေးပွဲ အောင်ပြီး လူရည်ချွန် အရွေးခံ လိုက်ရ သလို
ဆယ်တန်းကို ဘာသာစုံဂုဏ်ထူး နဲ့အောင်တဲ့ အောင်စာရင်းကို ကြည့်နေရ သလို
အဘရဲ့ post ကတော့လေ အပေါ်က အရသာ တွေနဲ့မလဲနိုင်အောင် အရသာ ရှိပါပေ့
လက်ကိုင်တုတ်လိုအသုံးချခံနေရတဲ့ မီဒီယာသမား လုံးဝကို ကွာခြားသွားမှာအမှန်ပါဘဲ။
ခင်ဗျားစိတ်ပူသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အသက်အန္တရာယ်နှစ်ခုစလုံး
သူပျောက်ကွယ်သွားတာကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ဆုံးသွားတာနဲ့အတူတူပါဘဲ။
အဲတော့ အပျောက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် တတ်စွမ်းသမျအကာအကွယ်ပေးရမှာအမှန်ပါဘဲ။
ဒီပိုစ်အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်သလို ရာနုန်းပြည့် သဘောတူပါ၏။
ဒီသတင်းကြားစကတော့ ဒေါ်စုရဲ့ လုံခြူံရေးတာဝန်ခံ မောက်မာတယ်ပဲ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒေါ်စုနဲ့NLD အရှိန်သုံးပြီး မယူသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ယူနေကြတာတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်၊
ဥပမာ NLD ရုံးဖွင့်ပွဲဆိုပြီး ၂နာရီလောက် ယာဉ်ကြောပိတ် လမ်းပိတ်ဖြစ်အောင် ကျငိးပတာမျိုးပါ။
အထူးသဖြင့် FR အမျိုး ကျွန်မအမျိူးတွေပေါ့။
အခု post ကို ဖတ်ရမှ ရှင်းတော့တယ်၊
FR ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်comment က post ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒေါ်စုအတွက်တော့ စိုးရိမ်မိတာ အမှန်ပါပဲ။
သူ့အဖေလိုပဲ လူထုအပေါ် အယုံကြည်လွန်ပြီး ကိုယ့်အတွက် နည်းနည်းမှ ထည့်မတွက်တော့ မသမာသူတွေ လက်ချက်မိမှာစိုးပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အနှံပြည့်တဲ့ စပါးနှံပါ။
သူ့ဘေးကလူတွေအနေနဲ့ physically လုံခြုံရေးပိုတင်းကြပ်ပေးကြပြီး ဆက်ဆံရေးမှာတော့ ပိုချိုသာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။။
တစ်ခုတော့ အမှားပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါကွယ် ။
Express Times ဂျာနယ်က ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေ ပိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ။
မှားရေးမိတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် ။
အဖြစ်အပျက်လေး ပိုပေါ်လွင်သွားအောင် ၊
အောက်က စာလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ကြပါအုန်း ။
ဒါကတော့ အစပေါ့ Express Times ရဲ့ တိုင်စာ
“ Weekly Express Times ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို NLD သို့ပေးပို့ခြင်း ”
အထက်ပါ ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊
ဆရာဦးဝင်းတင်၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် ဦးအုန်းကြိုင်တို့ထံသို့
အမှတ် (၉၇/ခ)၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း။
ရက်စွဲ။ ။ ၈ ၊ မေ၊ ၂၀၁၂၊
အကြောင်းအရာ။ ။ NLD လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူက Weekly Express Times မှ သတင်းထောက်အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် မီဒီယာသမားများကို စော်ကားပြောဆိုခြင်းကိစ္စအား လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြခြင်း။
မေလ ၈ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင်
(UMFCCI) ရုံး၌ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း (၄) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း၏ နာယကဖြစ်သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရာ သတင်းမီဒီယာသမားအများအပြားတက်ရောက် သတင်းရယူခဲ့ပြီး
Weekly Express Times သတင်းဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ကိုဟိန်းကိုစိုး၊
ကိုဇင်မောင်ထွန်းနှင့် မဖြိုးဖြိုးဝေတို့လည်း တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားကျင်းပနေစဉ်အတွင်း လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်သူဝင်းတို့နှုတ်ဆက်စကားပြောနေသည်ကို သတင်းထောက်ကိုဟိန်းကိုစိုးက သတင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် NLD မှ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသော ဦးကျော်စိုးနိုင်က
“ဟေ့ကောင် ဓာတ်ပုံမရိုက်နဲ့”ဟု တားမြစ်ပါသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော် ဒီတစ်ပုံလောက်ရိုက်ပါရစေ” ဟု ကိုဟိန်းကိုစိုးက ပြောကြားပြီးဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ်
ဦးကျော်စိုးနိုင်က ကင်မရာကိုင်သော လက်ကို ရိုက်ချလိုက်ပြီး
“မင်းကို ငါမရိုက်နဲ့လို့ ပြောတာနားမလည်ဘူးလား ဟေ့ကောင်” ဟု ဆိုကာ
ရုံးချုပ်၏ အိမ်သာအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး
သတင်းထောက်ကိုဟိန်းကိုစိုး၏ အင်္ကျီရင်ဘတ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ဆွဲစောင့်ကာ
“မင်းတို့ မီဒီယာသမားတွေက ပိုက်ဆံရလို့ အလုပ်လုပ်နေတာ။
ငါတို့က ဘာစောက်တစ်ပြားမှမရဘဲ ထောင်အကျခံပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကွ။
မင်းတို့အယ်ဒီတာတွေကိုပြောလိုက် — သားရဲ့ ”
ဟု လက်ရောက်မှု ကျူးလွန်ကာဆဲရေး တိုင်းထွာစော်ကားပြောဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Weekly Express Times အနေဖြင့်
ပြန်လည်အစားထိုး၍ မရနိုင်အောင် တန်ဖိုးမြင့်မားလှသော
ဦးကျော်စိုးနိုင်ထံတွင် အပြည့်အ၀တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိပါသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး၏ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဖော်ဆောင်နေသော NLD နှင့် ပြည်သူလူထုတို့အကြား ပေါင်းကူးပေးသော အခက်အခဲများစွာကြားမှ
စတုတ်္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ် ခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေသည့် မီဒီယာသမားများအပေါ် ဦးကျော်စိုးနိုင်၏ ရင့်သီးစွာ စော်ကားဆက်ဆံ လက်ရောက်မှုကျူးလွန်ခြင်းလုပ်ရပ်အား များစွာစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။
ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေသော NLD တွင် မြန်မာမီဒီယာသမားအားလုံးကို အထက်ပါအတိုင်း သိမ်းကျုံးစော်ကားပြောဆိုရဲခြင်းနှင့် မီဒီယာအပေါ် ယခုကဲ့သို့သောအမြင်မျိုးရှိနေသည့် ဦးကျော်စိုးနိုင်ကဲ့သို့ “စုန်းပြူး”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေဖြင့် ဦးကျော်စိုးနိုင်အား လိုအပ်သလို အရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား ယခုကဲ့သို့ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“မင်းတို့ မီဒီယာသမားတွေက ပိုက်ဆံရလို့ အလုပ်လုပ်နေတာ။ ငါတို့က ဘာစောက်တစ်ပြား မှမရဘဲ ထောင်အကျခံပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာကွ။ ဘယ်ကောင့်ကိုမှ စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ မင်းတို့အယ်ဒီတာတွေကိုပြောလိုက် —- သားရဲ့ . . . ” ဟု ပြောဆိုကာ လက်ရောက်ကျူးလွန်စော်ကားသော NLD လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူ ဦးကျော်စိုးနိုင်၏ လုပ်ရပ်အား
Weekly Express Times အနေဖြင့် လုံးဝ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်
– ပြည်တွင်းရှိ သတင်းမီဒီယာများအားလုံး
ဒါကတော့ အမေစု ရဲ့ လုံခြုံရေး ( ကျော်စိုးနိုင် (ခ) ဘောကြီး ) ရဲ့ ထွက်ချက်….
အနောင်ဇာက မီဒီယာတွေ နေရာယူပေးကြပါလို့ ကြေငြာတဲ့အချိန်မှာ
ညီလေးတော်ပြီ တော်ပြီဆိုပြီး ကိုယ်ကပြောတော့
တံတောင်နဲ့ မျက်နှာကို ဖောင်းကနဲ တွတ်တယ်။
တခြားလိုက်လာတဲ့ သတင်းထောက်တွေလဲ ရှိတယ်။
အိမ်သာထဲ ခေါ်သွားတယ် ဆိုတာက အဲ့ဒီနေရာက လူကြီးတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။
ရုတ်ရုတ်သဲသဲ မဖြစ်အောင် အိမ်သာထဲ ခေါ်သွားတာ။
မင်းဓါတ်ပုံရိုက်တာ ပိုက်ဆံရလားလို့ မေးတယ်။
ရတယ်ဆိုတော့ မင်းလခရလို့ မင်းလုပ်တာ မင်းအလုပ်မင်းလုပ်တာ။
ငါတို့လည်း အန်တီ့အတွက် လုံခြုံရေး ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်တာ။
ပိုက်ဆံ တပြားမှမရပဲ လုပ်နေတာ။
ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုလုပ်တာက ဘယ်လိုလဲလို့ မေးတယ်။
“ကျနော်ဒါတွေမသိဘူး ကျနော် ဓါတ်ပုံရဖို့ပဲ သိတယ်” တဲ့ ။
အမှန်အကန်ကိုတော့ မရေးပဲနဲ့ ရေးချင်တိုင်းရေးပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တင်လို့ ရမလား။
ကျနော် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွေ အင်တာနက်တွေ လုံးဝမကိုင်ဘူးနော်။
တိုင်စာအတွက်က အန်တီစုဆီကိုပါ လာတိုင်ပါ အကိုတို့ရှင်းမယ်။
သူတို့လုပ်တာကျတော့ ထည့်မရေးပဲနဲ့ သူတို့ရေးချင်တာကျတော့ ရေးလို့ရမလား။
ပြောချင်ရင်လာ သူတို့အယ်ဒီတာတွေလာ… ဒဲ့ရှင်းမယ်။
PS: ကျော်စိုးနိုင် (ခ) ဘောကြီး ဟာ NLD ပါတီဝင်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီနေ့အထိ သုံးရောင်ခြယ်အဖွဲ့ဝင် အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဘေးမှာရှိနေတဲ့ မျက်မြင် သက်သေ
သတင်းထောက် ကိုမောပြေ ( Freelance Video Journalist )
ရဲ့ အကြောင်းပြန်စာ ။
“ NLD လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူအပေါ် Express Times ဂျာနယ်၏ စွပ်စွဲချက် မမှန်ကန် “
၈ ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းးးရဲ့ လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ကျတော်လဲတက်ရောက် သတင်းယူပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကိုကျော်စိုးနိုင် နဲ့ သတင်းထောက်တို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာကို
ပြသနာကြီးးးမလာအောင် ကိုကျော်စိုးနိုင် နဲ့ သတင်းထောက်တို့ကြားမှာ
Express Times ဂျာနယ်၏ စွပ်စွဲချက် တွေဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စိုးနိုင် မှ
” ဟေ့ကောင် ဓါတ်ပုံမရိုက်နဲ့” တားမြစ်တာမဟုတ်ပါ ။
တခြားပွဲလာသူများရှေ့မှာ မီဒီယာပေါင်း များစွာက ပိတ်ကွယ်နေတာကြောင့်
တော်ပါတော့ တော်ပါတော့ … ပြီးမှ ဆက်ရိုက်ပါဆိုပြီး ပြောခြင်းပါ…
ကျန်တဲ့ သတင်းထောက်တွေ နောက်ဆုတ်ပေးပေမယ့်
Express Times ဂျာနယ် သတင်းထောက်ကတော့ နောက်မဆုတ်တာကြောင့် အခုတော့တော်သင့်ပြီညီလေး ပြီးမှ ဆက်ရိုက်လို့ပြောတာကြားလိုက်တယ်…
တစ်ဆက်တည်း မြင်လိုက်ရတာက သတင်းထောက်က
ကိုကျော်စိုးနိုင် မျက်နှာကို တံတောင်နဲ့ နောက်ပြန်ထိုးလိုက်ပြီး
ကျုပ်က သတင်းထောက်.. ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရမှာပဲလို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်…
Express Times ဂျာနယ်၏ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကာထားတဲ့
“ဟုတ်ကဲ့ပါ…ကျတော် ဒီတစ်ပုံလောက် ရိုက်ပါရစေ ”
ဆိုတဲ့ စကားကို သတင်းထောက်က လုံးဝမပြောခဲ့ပါ။။။
အမှန်က ကျတော်လဲသတင်းထောက် အနေနဲ့
သတင်းထောက်တွေက အမေစု ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းးးမှာပါ…
သတင်းထောက်ဆိုတာကို ထင်ရှားစွာ သိနိုင်တဲ့ အမှတ်အသား ဂျို မပါပါဘူး…
ဒီတော့ သတင်းထောက်ယောင်ဆောင်ပြီး အမေစု ကို လုပ်ကြံမယ်ဆိုရင်တောင်
အင်မတန် လွယ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်…
မဖြစ်နိုင်ဘူးး လို့ ဘယ်သူပြောမလဲ…
ဗိုလ်ချုပ် ကိုတောင် လူယုတ်မာတွေက ဒီလိုပဲ သတ်ခဲ့တာပဲ…
အဲ့ဒီနောက် ပြသနာက ပြီးမသွားတာက
Express Times ဂျာနယ်၏ သတင်းထောက်က NLD လုံခြုံရေးတွေ
ဒီလိုမျိုးတော့ သတင်းထောက်အလုပ်ကို မာန်တက်ပြီး အညိုးထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး…
တရားရုံးမှာ သူဘက် ၊ ကိုယ့်ဘက် လျှောက်လဲချက်တွေနဲ့
Express Times ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာချုပ်က
NLD ရုံးကို တရားဝင် စာရေးတိုင်ကြားတာကို ကြိုဆိုပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှားတယ် အဖြေမစစ်ရသေးဘဲ ကိုယ့်သတင်းထောက်ပြောတာကိုပဲ အမှန်လုပ်ပြီး
ဦးကျော်စိုးနိုင် ကို စုန်းပြူး လို့ သုံးနှုန်းခြင်း ၊
မှန်၏ မမှန်၏ သေချာစွာ အဖြေမထွက်ခင်
လူတစ်ယောက် ရဲ့ဓါတ်ပုံ ကို ကြေညာချက်မှာ ကပ်ပြီး
လူသိရှင်ကြား သတင်းဖြန့်ဝေပြောဆိုခြင်း တို့ကတော့ မသင့်တော်ပါဘူး…
မီဒီယာ လက်နက်ကို အလွဲသုံးရာရောက်ပါတယ်…
( Freelance Video Journalist )
ဒါကတော့ Express Times ဂျာနယ်ရဲ့
Chief Editor ကျော်ကျော်မင်း ရဲ့
ပြန်လည် အကြောင်းပြန်စာ ပါ ။
အဲဒီ Chief Editor ကျော်ကျော်မင်း ရဲ့ အကြောင်းပြန်စာ က ၊
အတွေးအခေါ် ကို အတွေးအခေါ် နှင့် ၊
အချက်အလက် ကို အချက်အလက် နှင့် ၊
တုန့်ပြန်ထားတာ မဟုတ်ပဲ ၊
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Personal တွေထည့်ရေးထားတဲ့ ၊
အဆင့် အတန်း နိမ့်တဲ့ စာတစ်စောင် ဖြစ်နေပါတယ် ။
အဲဒီ ပြန်စာကြောင့်ပဲ Express Times ဂျာနယ်ရဲ့
Image ဟာ အဆင့် အတန်း နိမ့်ကျခဲ့ရပါတယ် ။
ပညာရှင် / တတ်တွေရဲ့ ဝေဖန် ရှုံ့ချခြင်းကိုလည်း ၊
တော်တော် ခံခဲ့ရပါတယ် ။
ကိုမောပြေ The Voice Weekly ကို အလုပ်သင် သတင်းထောက်အဖြစ်
စရောက်လာစဉ်ကတည်းက အချိန်တွေကို ကျွန်တော် သတိရမိပါသေးတယ်။
သတင်းဆိုရင် လောဘအလွန်ကြီးတတ်တဲ့ သတင်းထောက်ပေါက်စအဖြစ်လည်း
အဲဒီအချိန်ကတည်းက ရာထူး အဆင့်အတန်းတွေရယ်၊
အကြီးရယ်၊ အငယ်ရယ် မခွဲခြားဘဲ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ယနေ့အထိ ဆက်ဆံခဲ့ပါသေးတယ်။
ခင်ဗျားသိမှာပါ ပြောမနာ၊ ဆိုမနာပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံဖူးတာ။
ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာက အစ ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလဲ သိမှာပါ။
အခု ခင်ဗျားက အဖြစ်မှန်ကို တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်နော်။
မနေ့က အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတုန်းက အခြားသက်သေတွေ ဖော်ပြတော့
ခင်ဗျား တိတိပပ ဘာမှ မချေပနိုင်ခဲ့ဘူး။
အခုမနက်လည်းကျရော ခင်ဗျားက ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီး စာတစ်စောင်ရေးခဲ့တယ်။
ခင်ဗျားမှာ သက်သေတွေများရှိမလား လို့တော့ သိချင်မိတယ်။
ပေါင်းလာခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းပီပီ
ခင်ဗျားတော့ အကွက်ထွင်ပြီလို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ဦးနော် အတွင်းသိ၊ အစင်းသိချင်း ဖော်ကောင်လုပ်မိတာကို။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေကိုတော့ ခင်ဗျားကို ထောက်ထားပြီး ဖွင့်မချတော့ပါဘူး။
ခင်ဗျား ပို့စ်နဲ့ အခြားပို့စ်တွေမှာတွေ့တဲ့ ကွန့်မန့်တွေကို ဖြေရှင်းချင်လို့သာ
ဒီစာကို ကိုယ့်ဝေါမှာ တက်ရေးရတာတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
နံပါတ် ၂ က ကြံဖွံ့ဂျာနယ်လို့ လူတွေထင်နေကြတယ်။
ခင်ဗျားအနေနဲ့ ခင်ဗျားပို့စ်ကို တာဝန်ယူတဲ့ အနေနဲ့
အဲဒီကွန့်မန့်မျိုးတွေကို ခင်ဗျားခြေဖျက်ပေးသင့်တယ် ။
ဘယ်သူကမှလည်း ကြိုးဆွဲနေတာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Weekly Express Times ဆိုတဲ့ သတင်းဂျာနယ်ကို
ထမင်းအငတ်ခံနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့
ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ထုတ်နေတာ ။
နံပါတ် ၄ က တစ်ချိန်က ဦးအောင်ဇော်မြင့် ပိုင်ခဲ့ဖူးတာ ဟုတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ထုတ်ဝေသူက ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပါ ကိုမောပြေ။
ဘယ်သူ့ဆီက ပိုက်ဆံမှ မရပါဘူး။
ပွင့်ပွင့်လင်းပြောရရင် ခင်ဗျားနိုင်ငံရပ်ခြားကရတဲ့ စာမူခလောက်တောင်
နံပါတ် ၅ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကို ထောက်ခံရင်
နိုင်ငံရပ်ခြားက စပွန်ဆာကောင်းကောင်းရမှာပဲ ဆိုတာမျိုး မျှော်လင့်နေရင်တော့
ခင်ဗျား မီဒီယာသမားမလုပ်နဲ့တော့လို့ အကြံပေးပါရစေ။
နံပါတ် ၆ က တစ်ဖက်သက်ကြေညာချက်ထုတ်တယ်ဆိုတာထက်
တရားဝင်ကန့်ကွက်စာပို့တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့်စာမှာ အရှင်းကြီးပါနေတာပဲ။
မှန်တယ်။ မှားတယ် နှစ်ဖက်စုံစမ်းပြီးရင် အမှန်တရားက ဘယ်မှ မပြေးပါဘူး။
သူငယ်ချင်းပေါ်မှာတော့ အမြတ်မထုတ်ပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါရစေ။
နံပါတ် ၇ န၊ အ၊ ဖ အရေခွံလဲ ကြိုးကိုင်တဲ့ သတင်းဌာနလို့ အချို့က စွပ်စွဲကြတယ်။
ကျွန်တော့်နာမည်ကို ထပ်ကြေညာပါရစေ။ ကျော်ကျော်မင်းပါ။
ဘယ်တုန်းကမှ။ ဘယ်တုန်းကမှ တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်တာမျိုး မခံခဲ့ဘူးဖူး။
ခုလဲမလုပ်ဖူး။ နောင်လဲမလုပ်ဖူးဘူး။ ကြိုက်သလို စုံစမ်းပါ။
ကျော်ကျော်မင်းဆိုတဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ ကိုမောပြေ သိပါတယ်။
နံပါတ် ၈ ခင်ဗျားအမြတ်ထုတ်တာ အရေးမကြီးပါဘူး။
ကိုမောပြေ ခင်ဗျားကြောင့် မီဒီယာတွေအပေါ် ပြည်သူတွေ အထင်လွဲရင်
ခင်ဗျားမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလေး ခင်ဗျားကို သတိပေးချင်တယ်။
နံပါတ် ၉ က ဦးခင်ရွှေဆို ခင်ဗျားတို့ ဘာမှ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ထက်ထက်မိုးဦး တုန်းက ဘာလို့ ပါးစပ်ပိတ်နေလည်းဆိုတဲ့ ကွန့်မန့်တွေ တွေ့တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားသိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ The Voice Weekly မှာရှိစဉ်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ The Voice Weekly နှစ်ပတ်တောင် အပိတ်ခံခဲ့ရသေးတယ်။
ဦးခင်ရွှေရဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို ဝေဖန်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်တော့ရော
ကျွန်တော်တို့ လူနှစ်ရာကျော် လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားပါ၊ မပါ မသိဘူးနော်။
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တာလေးကို ပြောတာ။
နံပတ် ၁၀ က ခင်ဗျားအပါအ၀င် တစ်ချို့က
အန်တီစုကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့၊ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရှေ့ရေးကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး
ကျိတ်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်ပါလားလို့လည်း အကြံပေးတယ်။
ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပါဦး အန်အယ်လ်ဒီက နောက်ဆို အာဏာရပါတီ ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာပီပီမရပ်ဘဲ ကျိတ်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင်
မီဒီယာဆိုတာက အမှန်တရားအတွက်ရပ်ရမယ်လို့ ခင်ဗျား သင်ကြားဖူးတာပဲ။ အမှန်တရားအတွက်ရပ်မှာလား။
ဟိုလူ့ဆိုရင် ကြိတ်ဖြေရှင်း၊ ဒီလူ့ဆိုရင် အော်ချက်လုပ်၊
နံပါတ် ၁၁ မီဒီယာတွေက ခုမှ အမေစုက တူတူတန်တန် ဆက်ဆံလို့ လူပါးဝတယ်
မီဒီယာ ဆိုတာက နှိပ်ကွပ်ခံရစဉ်မှာလည်း မီဒီယာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ တူတူတန်တန် ဆက်ဆံခံရတော့ ၀မ်းသာတာပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ဖမ်းဟယ်၊ ဆီးဟယ်လုပ်တုန်းကလည်း
ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာအလုပ်တွေကို ပီပီသသလုပ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။
ထောင်ထဲရောက်သွားခဲ့တဲ့ သတင်းသမားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတာ ခင်ဗျားသိပါတယ်။
ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်တောင် အချုပ်ခန်းထဲရောက်နေတဲ့ အချိန် ဘယ်သူလာထုတ်ပေးတာတုန်း။
ညကြီးသန်းခေါင် ဘယ်သူက လာပြီးခင်ဗျားကို ကူညီကဲ့သတုန်း ကိုမောပြေ။ ဇာတ်တူသားမစားကောင်းပါဘူးဗျာ။
ခင်ဗျားရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအနုပညာလည်း တကယ်မြောက်တယ်။
ဒါလည်း ခင်ဗျား ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ပြောချင်တာတစ်ခုက အမှန်တရားကတော့ ပေါ်ထွက်လာဦးမှာပါ။
အဲဒီတော့ အဖြစ်အပျက်က ဘယ်ဟာမှန်တယ်။
ဘယ်ဟာမှားတယ် ဆိုတာအခု အငြင်းမပွားချင်ဘူး။
ကိစ္စပြီးရင်တော့ မှားတဲ့သူဘက်က တောင်းပန်ကြေးပေါ့။
ကျော်ကျော်မင်း ( Chief Editor, Express Times )
ဒါကတော့ Satire လေး တစ်ပုဒ်ပါ ။
ရီစရာ အနေ နှင့် တင်လိုက်တာပါ ။
ဘောကြီး ကို ကမ္ဘာမကျေဘူး
by Alex Rain on Monday, May 14, 2012 at 11:18pm
ဒီကိစ္စကို တွေးတိုင်း သူမကျေနပ်.. တွေးမိတိုင်း တနုံ့နုံ့ နဲ့ ခံရခက်လှသည်။ စပ်ဖျင်းဖျင်း အောင့်သက်သက် ဖြစ်ရသည်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို..
သူသည် သူ့ကိုယ်သူ နှံ့နှံ့စပ်စပ် ရှိသည်ဟုထင်သည်.. သူက သတင်းတွေရော အတင်းတွေရော အကုန် စိတ်ဝင်စားသည်။ ရပ်ကွက်ထဲတွင် ခွေး၂ ကောင် ကိုက်တာမှ အစ အခြောက်မ တအုပ် မှောင်ရိပ်ခိုတာထိ သူမသိတာ မရှိ။ အပျော်တမ်း သတင်းလိုက်ကျင့်ရင်း လမ်းထိပ်က မိတ်ကပ် ကျော်ကျော် ခေါ် မာမီကျော်တို့ အုပ်စုနှင့် အဖွဲ့ကျသည်။ သူတို့ကို အထင်မသေးနဲ့… သတင်းစုံသည်။ သင်ဇာဝင့်ကျော် ဘရာဇီယာ က မိတ်အင် ချိုင်းနားကြီး ဆိုတာလည်းသိသည်။ သွန်းကြီး စမောဆွဲတာ လည်း မကျန်။ ဒါကို ကြည့်မရတဲ့ မွေးသဖခင်က အလုပ်သွင်းပေးလိုက်သည်။ တကယ့် သတင်းထောက်ကြီး ဖြစ်သွားတော့ ပျော်လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။
သူသတင်းထောက်ဖြစ်တာ ၆လ ကျော် ၇လ လောက်ကြာပြီ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဖောင်ဒေးရှင်း တခုတွင် အမျိုးသမီးကြီး ၏ သတင်းယူခွင့်ရသည်။ သည်အမျိုးသမီးကြီး ပုံ ကောင်းကောင်းရလျှင် သူ မျိုးမျိုးမြက်မြက် ရမည်။ ထို့ကြောင့် သူ သဲကြီးမဲကြီး ကျိုးစားသည်။ သို့သော် ကင်မရာကလည်း ကောင်းကောင်း မရိုက်တတ်သေး။ ခြေပြတ် ခေါင်းပြတ် မှောင်လွန်း ဖွေးလွန်းတွေသာ ရနေသည်။ ပုံကောင်းက မရသေး။ သည်တွင် ကိုယ်ရံတော် ဘောကြီး ဆိုသူ အနားကပ်လာသည်။ “ညီလေး တော်လောက်ပြီ” ဟု ပြောသည်။ ပုံကလည်း မရသေး၍ သူနည်းနည်းတင်းသွားသည်။ ဘောကြီး ဟိုဘက် လစ်သွားအောင် အသာလှည့်ကာ တံတောင် ၂ ချက်ကျွေးလိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ ဘောကြီးက လစ်မသွား။ လစ်မသွားသည့်ပြင် သူ့ကို အိမ်သာထဲသို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။
ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲခေါ်လာသော ဘောကြီး အိမ်သာထဲ ရောက်တော့ ပုံစံပြောင်းသွားသည်။ သူ့ နောက်ကျောဘက်မှ ရပ်ပြီး “ညီလေး အကို ထောင်ထွက်ဆိုတာ သိတယ် မဟုတ်လား” ဟု လေပြေလေးနှင့် သူ့နား နား ကပ်ကာ မေးလည်းမေး သူ့ ခါးကိုလည်း စုံကိုင်လိုက်လိုက်သည်။ သူ ဖျတ်ကနဲ ရင်ခုန်သွားသည်။ ထောင်ထဲမှာ ယောက်ျားတွေချည်းဆိုတော့ ဟိုကိစ္စတွေ သောင်းကျန်းတယ်ဟု သူကြားဖူးသည်။ ဘောကြီး နံမည် ကလည်း သူ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ မာမီကျော်တို့နဲ့ ပေါင်းမိတဲ့အချိန်ကထဲက သူပွင့်နေပြီး ဖြစ်သည်။ အလုပ်ထိခိုက်မှာစိုး၍ အပုန်းနေခဲ့ခြင်းကို ဘောကြီး သိသွားပြီဟု ထင်လိုက်သည်။ “ဟုတ်ကဲ”့ ဟု ရင် တလျပ်လျပ်ဖြင့် ခါးက ပုဆိုး ခါးပုံစကို လျှော့ဖို့ ပြင်ရင်း ဖြေလိုက်သည်။ သို့သော် မျှော်လင့် မထားတာ ဖြစ်သွားသည်။ ဘောကြီး အချိုးပြောင်းသွားပြန်သည်။ သူ့ကို စုံကိုင်၍ မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြန်လှည့်ခါ ပက်ပက်စက်စက် ဆဲတော့သည်။ ပြီး အပြင်ကို စောင့်ဆွဲ ခေါ်လာခဲ့လေတော့သည်။
သူ့ ရင်ခုန်သံတွေကို နားမလည်တဲ့ ဘောကြီး။ ငတုံး ဘောကြီး။ ထို့ကြောင့် သူ ဘောကြီးကို မကျေနပ်။ မာမီကျော်တို့ အဖွဲ့ကို ပြန်ပြောပြတော့လည်း မကျေနပ်ကြ။ ဒါ လူရှေ့သူရှေ့ အိမ်သာထဲ ခေါ်ပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် သက်သက် အရှက်ခွဲခြင်း ဟု ယူဆသည်။ ထို့ပြင် မာမီကျော်တို့ ဘော်ဒါ မာဆတ်ဂရုက ပိုမကျေနပ်။ ဒါ လိင်အခွင့်အရေးကို စော်ကားတာဟု မြင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘောကြီး တင် မက ဘောကြီး တို့ တဖွဲ့လုံး သူတို့ အကြောင်းသိစေရမည်။ ဘောကြီး နဲ့ ဘောကြီးတို့ တဖွဲ့လုံးကို ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီး ရှုံ့ချမည်။ ဂျာနယ်တွေထဲ ထည့် ဖွ မည်။ ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေမှာ ဖွ မည်။ ဖွဘုတ်ပေါ် တင်ပြီး ဖွ မည်။ အွန်လိုင်း မီဒီယာ၊ ပရင့် မီဒီယာ၊ ရှိ ရှိသမျှ မီဒီယာ အကုန်ပေါ်မှာ ဖွ မည်။ ဘောကြီး ဆဲတာ ကမ္ဘာက သိစေရမည်။
ဘောကြီး ကို ကမ္ဘာမကျေဘူးဟေ့….
[ မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ၊ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိပါက ခွင့်လွှတ်ပါရန်။ :D ]
ထူးခြားတဲ့ Comment လေး နှစ်ခုပါ ။
ဒေါ်စုကို မီဒီယာတွေက lobby လုပ်ပေးတာလား …အဲဒီလို လုပ်ပေးလို့ ဒေါ်စုဆိုတာကို လူထုကသိလာတာလား…….?
ဒေါ်စုက မီဒီယာတွေကို lobby လုပ်ပေးလို့ (စောင်ရေတက်…ဝင်ငွေကောင်း… နာမည်အသင့် အတင့်ရလာ) ဒီနေ့မီဒီယာဆိုတာ ဖြစ်လာတာလား ဆိုတာကို ရဲရဲဝံဝံပြန် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန် မေးကြည့်လိုက်ပါ။
MrMaung KoThet ( Face Book )
ဂျာနယ်အားလုံး NLD သတင်း မထည့်လို့က ပိုတောင်ကြိုက်သေးတယ် ။
လူတွေက ဒီလှိုင်းဂျာနယ်ကိုပဲ စုပြုံဝယ်ဖတ်ကြပြီး အမေစုတို့တွေလဲ ရံပုံငွေ များများရပြီး ၊
လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလဲ ပိုလို့တောင် လုပ်လို့ရဦးမယ် ။
( အမေတို့က ဒီလိုသဘောမျိုး မထားဘူးဆိုတာ
နားလည်ပေမဲ့ ကျိုးကြောင်း တွက်ချက်ပြတာပါ )
NLD မှာလဲ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက် ၊ ကိုယ်ပိုင် ဖေ့ဘုတ် ၊
ကိုယ်ပိုင်ဂျာနယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မေ့မနေကြနဲ့ဦး ။
လာပြီး သိပ်ဖြဲမချောက်နေနဲ့ ။
ကြောက်တတ်ရင် အပ်တိုတစ်ချောင်းမကိုင်ပဲ နိုင်ငံရေးကို နှစ်၂၀ကျော် လုပ်မလာခဲ့ဘူး ။
ခွန် ဒီးယမ် ( Face Book )
လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ ၊ ဒီ တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးမှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ ၊
တော်လိုက်တာ ဗျာ… နှိုင်းလိုက်တာ ကွက်တိပဲ ထိရောက်ပါပေတယ် .. အားပေးသွားပါတယ်
by အဘ ဥက္ကာကိုကို on Thursday, October 13, 2011 at 11:40pm ·
တစ်ရံရောအခါက လျှင်သူစားစတမ်း ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်သူများ နေထိုင်သမှုပြုရာ
မြန်မာဟူသော နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခု ရှိလေ၏။ ထိုနိုင်ငံတွင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်မှု၊
လက်သီးလက်မောင်းတန်းမှု၊ မယုံဘူး..မယုံဘူးဟု ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောဆိုမှု၊ လမ်းမပေါ်တွင်မူးယစ်လမ်းလျှောက်မှုတို့ဖြင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံထားရသူများရှိလေ၏။
အတင်းပလင်းအဖျင်းမျိုးစုံကို စပ်စုတတ်ပြီး ကြားလာသောအတင်းအဖျင်းများကို စာရွက်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေလေ့ရှိကြသော အဆင်းဘီးတပ်သူ အတင်းထောက်များလည်း ရှိလေ၏။ တစ်နေ့သောအခါ ထိုနိုင်ငံတွင် ထိပ်ပြောင်၍ သမ္မတဖြစ်လာသော ဂီးဆောင်ဂျောင်း အူးတိန်းရှိန်ဆိုသူသည် မလိမ္မာသဖြင့် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားသော သကောင့်သားလေးများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်လေသည်။
ထောင်တွင်းမှ မလိမ္မာအခါခါမိုက်သူများ ထွက်လာကြသောအခါ ပြင်ပရှိလူအုပ်ကြီးနှင့် ရောထွေးရစ်ပတ် ရှုပ်ယှက်ခတ်လေတော့ရာ …..
ကနဦးတွင်….. ခံစားရသော ဝေဒနာကို ခင်ပပ၀တီလှိုင်သိန်းခမျာ ကြိတ်မှိတ်ခံပါသော်လည်း မအောင့်နိုင်သည့်အဆုံး နောက်ဖက်သို့ ချာခနဲလှည့်ပြီး –
““ဘယ်ကောင်လဲ.. ဘယ်ကောင်လဲ…. ငါ့ဖင်ကိုနှိုက်တာ… ငါ့ဖင်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဟော့သလို ဟော့သလို နောက်ကနေ နှိုက်နေတာ ဘယ်ကောင်လဲ”” – ဟူ၍ အော်ဟစ်လေတော့၏။ အနီးအနားရှိ အတင်းထောက်လေးများလည်း အူလည်လည်ဖြင့် သူ့ကြည့်ကိုယ့်ကြည့်ဖြစ်ကုန်ကြလေသည်။ ပြီးသော် ကိုယ့်လက်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ကြလေ၏။ ထို့နောက် လက်ဖျားလေးများကို နမ်းရှုပ်ကြည့်ကြလေ၏။
ထို့ကြောင့် ခင်ပပ၀တီလှိုင်သိန်း ဒေါသထွက်လေသည်။ ဘယ်သူမှန်းလည်းမသိ၊ အကောင်အထည်မပေါ်သောကြောင့် ရှူးရှူးရှဲရှဲဖြင့် လှည့်ပြန်ခဲ့ရလေတော့သည်။ အတင်းထောက်များက ခွေးနှစ်ကောင်ဖင်ပူးတာကိုတောင် အလွတ်ပေးသူများမဟုတ်တော့ ခင်ပပ၀တီလှိုင်သိန်း ထောင်ရှေ့မှာ ဖင်နှိုက်ခံရသည့်ကိစ္စက မပြီးပြတ်သွားခဲ့ပေ။
အတင်းထောက်လောကတွင်မူ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်နေလေ၏။ အတင်းထောက်အသစ်မလေးများက ထောင်ရှေ့မှဖြစ်ရပ်ကို နားနှင့်ဆတ်ဆတ်ကြားရုံမျှဖြင့် တွန့်လိမ်ကုန်ကြလေသည်။ အတင်းထောက်ယောက်ျားလေးများကလည်း ခင်ပပ၀တီလှိုင်သိန်းအမှုတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်နိုင်မည်ဆိုသည်ကို စုံစမ်းကြလေသည်။ လက်ရဲဇက်ရဲရှိသူများ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမရသူများစသဖြင့် ယခင်လက်စလက်နရှိဖူးသူများကို စောင့်ကြည့်ကြလေသည်။
ထို့ကြောင့် အတင်းထောက်လောကကြီးသည် အချင်းချင်းပြန်လည်စောင့်ကြည့်ကြရင်းဖြင့် ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေေ၀ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ အမှုကမပေါ်။ တချို့တလေကတော့.. ““သတင်းနှိုက်လို့မရလို့ ဖင်နှိုက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်”” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ““သတင်းနှိုက်တာ အရှိန်လွန်ပြီး ဖင်ပါနှိုက်မိသွားတာဖြစ်မယ်”” ဟု၍လည်းကောင်း သုံးသပ်ကြလေသည်။
အတင်းထောက်လောကတွင် ထိုအမှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်း ဝေဖန်ချက်များလည်း တပုံတပင်ပေါ်ထွက်လာလေသည်။
အတင်းထောက်တစ်ဦးက ““ ဖင်နှိုက်တယ်ဆိုတာ… ဖင်ရှိနေလို့ပဲ”” ဟု စတင် ကြေငြာလိုက်သောအခါ…““မိန်းကလေးများတွင် ဖင်မရှိသင့်”” ဟူသည့် မဟာတွေးခေါ်ချက်များ အလျှိုလျှိုပေါ်လာပြန်၏။ ဖင်မရှိလျှင် ဖင်နေရာတွင် ဘာထပ်ထည့်ကြမည်နည်းဟူသည့် တန်ပြန်မေးခွန်းများ ထွက်လာသောအခါ တချို့အတင်းထောက်ပညာရှိများက ဖင်နေရာတွင် ရင်သားကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ကြည့်သင့်ပါသည်ဟု မီးလောင်ရာလေပင့်ကြကုန်၏။
မိန်းကလေးများတွင် ရင်ရော ဖင်ပါမရှိလျှင် ယောက်ျားလေးများနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး မိန်းမသားတို့ကြွေးကြော်လေ့ရှိသော ယောက်ျားများနှင့်ရင်ဘောင်တန်းမည်ဟူသည့် အဆိုသည်လည်း အောင်မြင်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းကြကုန်၏။ အတင်းသင်တန်းများပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းကျောင်းကြီးများကလည်း ဖင်စပါယ်ရှယ်လစ်သင်တန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းဖွင့်လှစ်ရန် စဉ်းစားလာကြလေ၏။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း ဥပမာ- မောင်ခိုင်(ဖင်ဗေဒ) စသဖြင့်… မောင်နိုင်(PHD-Phin) စသဖြင့် ဖင်မေဂျာဖြင့်ဘွဲ့ရများ၊ ဖင်လော်ဆော်ဖာပညာရှင်များ မွေးထုတ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်တွင်အဆိုပြုရန် ဂျာနယ်များမှတဆင့် ခပ်တည်တည်တိုက်တွန်းကြသော် လွှတ်တော်အမတ်များလည်း ဖင်ကျိန်းရလေ၏။ အတင်းထောက်မိန်းမသားများကလည်း အဆိုပြုချက်များကို အတိအလင်းကန့်ကွက်ကြကာ ဖင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီတစ်ရပ်ကို စုဝေးဖွဲ့စည်း၍ ခံစစ်ပြင်လိုက်ကြလေ၏။ ထိုအတင်းထောက်မိန်းမသားများ ဖင်ကာကွယ်ရေးကော်မတီကို အတင်းထောက်လောကအတွင်းရှိ ဖင်ကြီးသူများက ဦးဆောင်ကြလေ၏။ ဖင်မဟာဗျုဟာများကိုချမှတ်ကုန်လေ၏ ဖင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖင်များနေ့ကို သတ်မှတ်ကြကုန်လေ၏။
ဖင်ရှောင်နည်းသင်တန်းများကိုလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များဖိတ်ခေါ်၍ ဖွင့်လှစ်လာကြလေ၏။ ထိုဖင်ရှောင်နည်းသင်တန်းများတွင် ဖင်ဝှေ့ရန်ရှောင်၊ ဖင်မယဉ်သာ စသော ခေါင်းစဉ်များ၊ အာရုံခံမိတာနှင့် ၀ှစ်ခနဲရှောင်တိမ်းနည်းအသွယ်သွယ်များ၊ လက်ညိုး၏ဦးတည်ရာနေရာကို ဆတ်ခနဲကျုံ့လိုက်နည်းများ စသည်ဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးသည်ကို တွေ့ရလေ၏။
““ဖင်ပြောင်ကြီး အမြီးနားကျမှတစ်နေမယ်”” ဟူသော စကားပုံတစ်ရပ်လည်း ပေါ်ထွန်းလာလေ၏။
အစည်းအဝေးများတွင်လည်း “တင်ပြသည်” ဟူသော စကားလုံးအစား “ဖင်ပြသည်” ဟူသောစကားလုံးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးစွဲလာကြလေတော့၏။ နည်းပညာကမ်ပနီများကလည်း မိန်းကလေးများဖင်မှာတပ်ဆင်ရန် အလို့ငှာဆို၍ အသားကပ်စီစီတီဗီကလေးများကို တီထွင်ဖြန့်ချိကြကုန်လေ၏။ အ၀တ်အစားဒီဇိုင်နာများကလည်း “ဖင်ပျောက်ဝတ်စုံ” ဆိုသည်များကို ဖောဖောသီသီတီထွင် ဖြန့်ချိလာကြလေ၏။ အမှန်တကယ်ဝတ်ဆင်ကြည့်သောအခါ ဖင်မပျောက်ဘဲ ဖင်ကောက်လာသည်ကိုသာ မြင်ကြရလေ၏။
“ဖင်ပိန်ရင် ဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံး”ဟူသည့် စကားပုံများပေါ်လာသဖြင့် ဖင်ပိန်သောမိန်းကလေးများဖုံးကွယ်ရန် သူ့ဘာသာနေသော ဆိတ်များကို အရေခွံဆုတ်ကြလေ၏။ ထိုသို့… ထိုသို့ဖြင့် ….
ထောင်ဂဏန်းမျှသော အတင်းထောက်တို့သည် အထက်ပါကဲ့သို့ ဖင်ကိစ္စဖြင့် အလုပ်များနေကြသည်ကိုကြည့်ကာ ….
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရှိ လူဦးရေသန်းခြောက်ဆယ်ခမျာ မရိုးမရွဖြင့် “ဖင်တမမ” ဖြစ်နေကြရလေတော့သတည်း။ ။
(အကျဉ်းကျသူများအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည့်နေ့က သတင်းထောက်တစ်ဦးကို မဖွယ်မရာပြုခံရသည်ဟူသည့် သတင်းများ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းမှာ မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။ ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ပါမည်။ သို့သော် သတင်းများကတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ပဲဖြစ်ပါသည်။ ဤသရော်စာသည် ရယ်စရာမောစရာအနေဖြင့်သာ ရှုမြင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါ၍ မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါကြောင်း သိစေလိုပါသည်။ ဘလော့ဂါသတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့် ဂျီတော့ခ်ပေါ်တွင် စကားပြောကြရာမှတဆင့်
ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ကာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ကမြင်းကြောထ ရေးသားသရော်လိုက်ရပါသည်။
လွန်တာရှိ ၀န္ဒမိပါ အရပ်ကတို့။)